China Rabies Virus Anti munhu Anokurumidza Test fekitori uye vanogadzira | Testsea
Utachiona Sisease Bvunzo
Nhanho imwe SARS-CoV2 (COVID-19) IgG / IgM Muedzo
Rabies Virus Kurwisa Anokurumidza Bvunzo
Feline Toxoplasma gondii IgG / IgM Muedzo
Testsea Chirwere Chekuedza Malariya pf / panwi-mutsara Wokurumidza ...
Chigadzirwa Izita Chimbwamupengo Virus Ab bvunzo kukaseti
Zita reBrand Testsealabs
P lace yeiyo Yakavamba Hangzhou Zhejiang, China
Saizi 3.0mm / 4.0mm
Muenzaniso Ropa Rizere, Serum
kunyatsoita Kupfuura 99%
setifiketi CE / ISO / FDA
Verenga Nguva 10min
Waranti Kamuri tembiricha 24 mwedzi
Iyo Rabies Virus Antibody Rapid Test ndeyekutarisa kwakanyanya uye kwakananga kuongororwa kweutachiona hwetachiona Ab mune canine yakazara ropa, seramu kana plasma. Iyo bvunzo inopa kukurumidza, kupusa uye hweMhando yemhando pamutengo wepasi wakanyanya kuderera pane zvimwe zvigadzirwa.
• Materials Kunopiwa
• Zvekushandisa Rinodiwa Asi Not Kunopiwa
Timer 2. Semuunganidzwa midziyo yemidziyo
The kuonekwa bhodhi iri huviri Mitsetse, uye mugumisiro zvakajeka uye nyore kuverenga.
Dzidza kushandisa 1 miniti uye hapana midziyo inodiwa.
10minutes kubva pane zvabuda, hapana chikonzero chekumirira kwenguva refu.
1) Bvumira zvose zvi- zvinoriumba uye mharidzo kusvika mukamuri tembiricha asati vachimuidza.
2) Wedzera 1 kudonha kweropa rakazara, seramu kana plasma kune sampuli uye kumirira 30-60seconds.
3) Wedzera 3drops of buffer kune sampuli tsime.
4) Verenga kunoguma mukati maminitsi 8-10. Usaverenga mushure memaminitsi makumi maviri.
Ini NDINOGONESA IZVO ZVAKANAKA
-Positive (+): Kuvapo
-Negative (-): zvakajeka C mutsetse Only kuoneka. Hapana T mutsara.
-Invalid: unoonekwa muC zone. Hazvinei kana T mutsetse anooneka.
Isu, Hangzhou Testsea Biotechnology Co, Ltd ikambani iri kukura nekukurumidza inyanzvi yebiotechnology yakanyanzvi mukutsvakurudza, kugadzira, kugadzira uye kugovera zvepamberi in-vitro diagnostic (IVD) kits zvekuongororwa nemidziyo yekurapa.
Yedu nzvimbo ndeye GMP, ISO9001, uye ISO13458 yakasimbiswa uye isu tave neEC FDA kubvumidzwa. Iye zvino tiri kutarisira kubatana nemakambani mazhinji ekunze ekuvandudza zvinhu.
Isu tinoburitsa bvunzo dzekuzvidzivirira, chirwere chetachiona, bvunzo dzekushandisa zvinodhaka, bvunzo dzezvirwere zvemukati, bvunzo dzezvipfukuto, zvekudya nezvekuchengetedzwa uye bvunzo dzechirwere chemhuka, nekuwedzera, yedu brand TESTSEALABS yave ichizivikanwa kwazvo mumisika yemumba uye yekumhiri kwemakungwa. Mhando yepamusoro uye yakanaka mitengo inoita kuti titore zvikamu makumi mashanu muzana zvemigove yemumba.
Yapfuura: Feline Toxoplasma gondii IgG / IgM Muedzo
Inotevera: Nhanho imwe SARS-CoV2 (COVID-19) IgG / IgM Muedzo
Canine Coronavirus Muedzo
Feline Kusakudzwa kweFIV Kukurumidza Kuedza
Canine C-inoshanda Chema Protein Bvunzo
Canine Coronavirus Antigen Bvunzo
Canine Rotavirus Antigen Bvunzo
Canine Giardia Antigen Rapid Muedzo
Canine Parvovirus Antigen Bvunzo
Feline Coronavirus Fcv Ag Test Kit , Feline Coronavirus Bvunzo , Canine Coronavirus Ag Rapid Test Kit , Feline Coronavirus Test Kit , Canine Coronavirus Ag Test , High Sensitive Feline Coronavirus Ag Test Kit ,